Govt provides food to migrant workers in Thailand | Myanmar Business Today
Home Business Govt provides food to migrant workers in Thailand
The Government of Myanmar supplied food to Myanmar migrant workers being quarantined in Thailand, according to the Myanmar Embassy in Bangkok.
Myanmar officials led by U Myo Myint Than, Ambassador to Thailand, provided food for Myanmar migrant workers being quarantined as there isaCOVID-19 breakout ataseafood market in Samut Sakhon Province.
The authorities handed out 1,359 5kg-bags of rice, 1,350 one-liter oil bottle, 1,350 bags of pulse, 1,350 cartons of eggs, 1,350 cartons of cans, and 9,450 six-liter water bottle to 1,350 Myanmar migrant worker families being quarantine near Talaku seafood market.
Meanwhile, other officials led by U San Oo Maung, Deputy Head of the Myanmar Embassy in Thailand, went to Talaythai seafood market in Samut Sakhon Province and provided 5kg-rice bags, 1-liter oil bottles, 500kg-bean bags, cartons of eggs and cans, 6-liter water bottle to 360 households.
Myanmar government is trying to make sure its migrant workers quarantined in Thailand face no food shortage and will contact and meet Thia authorities to help Myanmar migrant workers.
International Organization for Migration estimated in 2016 that there can be as many as3million Myanmar migrant workers in Thailand.
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံနေရသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စမွတ်စခွန်ရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ကို မြန်မာ အစိုးရက စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
လတ်တလော COVID-19 ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စမွတ်စခွန်ခရိုင်၊ ငါးပုစွန်ဈေးဧရိယာတွင်အသွားအလာကန့်သတ်ခံနေရသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား များအား မြန်မာအစိုးရမှ ထောက်ပံ့သည့် စားနပ် ရိက္ခာများကို ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း ဦးဆောင်သည့် တာဝန်ရှိသူ များက လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ပေးအပ်ရာတွင် မြန်မာ သံရုံး၊ စစ်သံရုံး၊ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ သည် စမွတ်စခွန်ခရိုင် တလာကုပုစွန်ဈေးအနီး အသွားအလာကန့်သတ်ခံနေရသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အိမ်ခန်း (၁၃၅၀) ခန့်အတွက် ဆန်(၅) ကီလိုဝင်အိတ် (၁၃၅၀) အိတ်၊ဆီ(၁)လီတာဗူး (၁၃၅၀) ဗူး၊ ပဲ(၅၀၀) ဂရမ်ပါ (၁၃၅၀) အိတ်၊ ကြက်ဥ(၁၅)လုံးပါကတ် (၁၃၅၀)ကတ်၊ စည်သွပ်ဗူး (၁၀)ဗူးပါ (၁၃၅၀) ကတ်၊ သောက်ရေသန့်(၆)လီတာပါ (၉၄၅၀) ဗူးတို့အား ၂၃-၁-၂၀၂၁ ရက်တွင် သွားရောက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ မြန်မာသံရုံး၊ ဒုတိယအကြီးအကဲ သံအမတ် ဦးစန်းဦးမောင် ဦးဆောင်သည့် သံရုံး၊ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး၊ အချက်အလက် ကောက်ယူရေးဌာနခွဲ(မဟာချိုင်)မှ တာဝန်ရှိသူ များသည် စမွတ်စခွန်ခရိုင် တလေထိုင်းငါးဈေး အနီးရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အိမ်ခန်း (၃၆၀)ခန်းအတွက် ဆန်(၅) ကီလိုဝင်အိတ် (၃၆၀) အိတ်၊ ဆီ (၁)လီတာဗူး (၃၆၀) ဗူး၊ ပဲ (၅၀၀)ဂရမ်ပါ (၃၆၀)အိတ်၊ ကြက်ဥ (၁၅) လုံးပါကတ်(၃၆၀)ကတ်၊ စည်သွပ်ဗူး (၁၀) ဗူးပါ (၃၆၀) ကတ်၊သောက်ရေသန့်(၆)လီတာပါ (၂၅၂၀) ဗူးတို့အား အဆိုပါနေ့တွင်ပင် သွားရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းတို့ အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံနေရစဉ်အတွင်း နေထိုင်စားသောက် ရေး အဆင်ပြေစေရန်ယခုကဲ့သို့ စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အလုပ် သမားဝန်ကြီးဌာန၊ စမွတ်စခွန်ခရိုင်ရှိ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် ဆက်သွယ်လျက် ၎င်းတို့ထံ သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး ဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Acheter Viagra En Ligne Avant de commencer la recherche d’une solution, nous avons besoin d’abord de définir le problème. Item: Viagra vrai acheter 4.
Pharmacie de l’Europe. best online casino Nous offrons les produits de ces sociétés bien connues, comme Cipla Laboratories fondée en.
Previous articleMore relief flight to bring backs Myanmar people stranded in Malaysia
Next articleMyanmar Embassy in Malaysia to temporarily close due to lockdown